Nanmalgyi - Page 966 of 969 - News & Entertainment
December 15, 2017 Datha 0
၉တန်းမှာ Aအဆင့် ထူးချွန်ဆု၊ ၅ဘာသာ ဂုဏ်ထူးနှင့် အောင်မြင်ခဲ့တဲ့ သရုပ်ဆောင် အရိုင်းရဲ့သမီးလေး
December 10, 2017 Yuki 0
သရုပ်ဆောင် အရိုင်းရဲ့သမီးလေး ကတော့ ၉တန်းမှာ Aအဆင့် ထူးချွန်ဆု၊ ၅ဘာသာ ဂုဏ်ထူးနှင့် အောင်မြင်ခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။ စာတော်တဲ့ အရိုင်းရဲ့သမီးလေး ကိုလည်း အားပေးရင် Like & Share လုပ်သွားဖို့ မမေ့နဲ့နော်။
(၂)ဦးတည်းသာကျန်ပြီး မျိုးဆက်ပြတ်ရန်အလားလာ ရှိနေတဲ့ မြန်မာ့နွယ်ဖွား ရှားပါး ထရုံလူမျိုးများ မြန်မာပြည် ကချင် ပူတာအို ခရိုင် နောင်မွန်မြို့နယ် ပန်းနန်းဒင်မြို့နယ်ခွဲးကနေ၈ ရက်ခြေကျင်ခရီးအကွာ / ခါကာဘိုရာဇီတောင်ခြေရွာတွေမှာတိဘက် မြန်မာနွယ်ဖွားများအနက် အရပ်( ၂ ပေ. ၃ပေ. )ပေခန့်ရှိ ထရုံလူမျိုးမိသားစု အရင်က မိသားစုဝင် […]
ဂေါတမဘုရား မပွင့်မီ မိမိတို့ကိုယ်တိုင်ဘုရားဖြစ်သည်ဟု ပြောဆိုကြသောတိတ္ထိကြီး(၆)ယောက်၏ အယူဝါဒများ..
ဂေါတမဘုရားရှင်မပွင့်ပေါ်မီ မိမိတို့ကိုယ်တိုင်ဘုရားဖြစ်သည်ဟု ရှေးဦးစွာပြောဆိုကြသောတိတ္ထိဆရာကြီး (၆)ယောက်တို့၏အယူဝါဒများ.. ဗုဒ္ဓလက်ထက်တော်အခါကဗုဒ္ဓနှင့်ခေတ်ပြိုင်တိတ္ထိဆရာကြီးခြောက်ယောက်ပေါ်ပေါက်ခဲ့ဘူး၏။ဗုဒ္ဓနှင့်ခေတ်ပြိုင်ဟုဆိုရသော်လည်းယင်းတို့သည်ဗုဒ္ဓ၏အရင်ကပင်ကြိုတင်၍ ဘုရားဟုဝန်ခံလျက်လူသူပရိသတ်အများခြံရံကျော်ဇောလျက်ရှိနေကြသူများဖြစ်၏။ ဗုဒ္ဓမပွင့်ပေါ်မီကာလအစောပိုင်းကတည်းက လောကမှာဘုရားပွင့်မည်ဟု ကောလဟလများထွက်ပေါ်လျက်ရှိနေသဖြင့် ယင်းကောလဟလများနောက်ခံထားလျက် ဘုရားအဖြစ်ဝန်ခံကာဟောပြောပို့ချအယူဝါဒတို့ကို ဖြန့်ချိနေကြသူများဖြစ်၏။ ယင်းခြောက်ယောက်တို့မှာ ပူရဏကဿ ပ၊မက္ခလိဂေါသာလ၊ အဇိတကေသကမ္ဗလ၊ပကုဓကစ္စာယန၊ နိဂဏ္ဍနာဋပုတ္တ၊သဉ္စယဗေလဋ္ဌပုတ္တတို့ဖြစ်ကြ၏။ဘုရားမပွင့်မီကာလကဗုဒ္ဓဂုဏ်တစ်စုံတစ်ရာ မရှိပါဘဲလျက်ဘုရားဟုဝန်ခံလျက် ဘုရားတုလုပ်နေကြသူများပင်ဖြစ်ပါ၏။ ထိုဘုရားတုတို့ဟောပြောသမျှသည်လည်း တရားတုများသာဖြစ်ပါ၏။ထိုဘုရားတုတို့၏ တပည့်သာဝကအဆက်ဆက်တို့သည်လည်း သံဃာတုတို့သာဖြစ်ပါ၏။မှန်ပါ၏။အစစ်အမှန်နှင့် အတုအပတို့မည်သည်လောက၌ ဒွန်တွဲလျက်ရှိရိုးဖြစ်၏။ […]
လူပျိူကြီး ဝေဠုကျော် သူ့ချစ်သူကောင်မလေး ဘယ်သူလဲဆိုတာကို အလင်းပြလိုက်ပါပြီ…
လူပျိူကြီး ဝေဠုကျော် သူ့ချစ်သူကောင်မလေး ဘယ်သူလဲဆိုတာကို အလင်းပြလိုက်ပါပြီ… ပရဟိတမင်းသားလို လူသိများကြတဲ့ ဝေဠုကျော် ဟာ အမြဲတမ်းလိုလိုသူချစ်တဲ့ ပရဟိတအလုပ်တွေနဲ့သာ အချိန်ကုန်နေတဲ့သူတစ်ယောက်ပါ။အများအတွက်ဆို ရှေ့ဆုံးကနေအနစ်နာခံပြီး ကူညီတတ်သူတစ်ယောက်လဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လဲ့ မြန်မာတစ်နိုင်ငံလုံးသာမက ကမ္ဘာကပါချီးကျူးဂုဏ်ပြုနေရတာပါ။ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းနေတတ်တဲ့ ဝေဠုကျော်ဟာ အချစ်ရေးမှာတော့ အရမ်းသိုသိုသိပ်သိပ်နေတတ်သူပါ။သူ့ကိုချစ်တဲ့ပရိသတ်တွေကလည်း လူပျိုကြီးလိုသာသိထားကြတာပါ။သူ့ရဲ့ချစ်သူအလန်းလေးက ဒီဇင်ဘာလ (၂) ရက်နေ့မှာကြရောက်တဲ့ သူ့ရဲ့မွေးနေ့ကိုဆိုတောင်းပေးခဲ့တာပါ။ […]
ကင်ဆာအတွက် ဆောင်ရန်၊ ရှောင်ရန်
December 9, 2017 Yuki 0
ကင်ဆာအတွက် ဆောင်ရန်၊ ရှောင်ရန် မင်္ဂလာပါ မိတ်ဆွေတို့ရေ။ ကျန်းမာခြင်းသည် လာဘ်တစ်ပါးဆိုတာ တကယ်မှန်တဲ့ စကားပါ။ ကျန်းမာခြင်း၏ တန်ဖိုးကို ဆေးရုံမှာ နှစ်ရှည်လများ နေရတဲ့ လူမမာများက ပိုမိုနားလည်ကြပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် သင်လည်း ကျန်းမာနေစဉ်မှာ ကိုယ့်ကျန်းမာရေးကို အလေးထားဂရုစိုက်ကြပါလို့ သတိပေးပါရစေ။ ကင်ဆာရောဂါကို ဖြစ်စေနိုင်သော အစားအစာများ […]
“ခွန်းဆင့်နေခြည်ကို ကြိတ်ကြိုက်ခဲ့ဖူးတယ်” လို့ ဝန်ခံလာတဲ့ သူထူးစံ သရုပ်ဆောင် သူထူးစံက သူနဲ့ အနုပညာလက်တွဲဖော် တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ ခွန်းဆင့်နေခြည်ကို တစ်ချိန်က ကြိတ်ကြိုက်ခဲ့ဖူးတယ် လို့ ပြောလာပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်က သူထူးစံနဲ့ ခွန်းဆင့်နေခြည် တွဲရိုက်ထားတဲ့ ဓာတ်ပုံအချို့နဲ့ ပက်သက်ပြီး သူတို့နှစ်ယောက် လက်တွဲနေတာလားလို့ ဖေ့စ်ဘွက်မှာ သတင်းအချို့ […]
သင့်ရာသီခွင်အရ ၂ဝ၁၈ မှာ သင်ဘာတွေဖြစ်နေမလဲ ဆိုတာ ကြိုတင်သိနိုင်ဖို့ ဖတ်​ကြည့်​လိုက်​​နော်​ ၁။ မိဿရာသီဖွား (Aries ) မတ်လ (၂၁) မှ ဧပြီလ(၂ဝ) ရက်အတွင်းမွေးဖွားသူများ ၂ဝ၁၈ ကသင့်အတွက်တော့ အဖြစ်အပျက်ပေါင်းများစွာနဲ့ပြည့်နေတဲ့ နှစ်ဖြစ်ပါတယ်။ သင့်အိပ် မက်တွေတကယ်ဖြစ်လာဖို့ နည်းလမ်းကောင်းတွေပေါ်လာလိမ့်မယ်။ အလုပ်ကြိုးစားလေလေတိုးတက် လေလေဖြစ်မယ့် […]
ဆရာမရှေ့ ဖတ်ပြလိုက်ရတဲ့ ညိမ်းမောင်ရဲ့ ရည်းစားစာ ဖြစ်ပုံ
“ဆရာမ သားကို ဖိုး​ထောင်​ဖင်​ချတယ်​ … ” “​ဟေ … ” ငြိမ်း​မောင်​ တိုင်​လိုက်​သည့်​စကား​ကြောင့်​ ဆရာမ ​ငေါက်​ခနဲ မတ်​တပ်​ထရပ်​လိုက်​သည်​။ သူတိုင်​လိုက်​သည်​ကို​တော့ အတန်းထဲမှ မည်​သူမှ မကြားလိုက်​ … “ဖိုး​ထောင်​ လာစမ်း ” ဆရာမ ​ခေါ်လိုက်​​တော့ တစ်​တန်းလုံးအသံတိတ်​ပြီး ဖိုး​ထောင်​အား […]
Myanmar Idol Season3ရဲ့ အကဲဖြတ်ဒိုင်တွေက ဘယ်သူတွေဖြစ်မလဲ
Myanmar Idol Season3ရဲ့ အကဲဖြတ်ဒိုင်တွေက ဘယ်သူတွေဖြစ်မလဲ မြန်မာတနိုင်ငံလုံးက ပရိသတ်များစွာ ကြိုက်နှစ်သက်ကာ စောင့်မျှော်ကြည့်ရှုကြတဲ့ Myanmar Idol သီချင်းဆိုပြိုင်ပွဲကြီးရဲ့ Season3ကို မကြာခင်မှာ ပြုလုပ်တော့မှာဖြစ်ကာ ပါဝင် အကဲဖြတ်ပေးကြမယ့် ဒိုင်လူကြီး ၃ ဦးထဲမှ ၂ […]